CAST - Rindrambaiko maimaim-poana amin'ny famakafakana heloka bevava - Geofumadas
Ny fijerena ny lamina ara-tsimok'ireo zava-nitranga sy ny fironana ara-toekarena dia lohahevitra mahaliana ho an'ny governemantam-panjakana na eo an-toerana.
CAST no anaran'ilay rindrambaiko maimaim-poana, voalohan'ny Crime Analytics for Space - Time, izay natsangana tany 2013 ho vahaolana loharanom-panokafana amin'ny famakainan'ny actuarial, miaraka amin'ireo modely isam-bolana ary fironana algorithm amin'ny fitantanana ny antontan'isa mpanao heloka bevava.
CAST dia rindranasa mpanjifa novolavolaina tao amin'ny Python sy C ++ izay miasa amin'ny Windos, Mac ary Linux, novolavolain'ny GeoDA Center, izay namolavola fampiharana fandalinana computational sy spatial isan-karazany. Ity Center ity dia manana laboratoara izay natsangan'ny talen'ny Sekolin'ny siansa jeografika sy ny drafitra an-tanàn-dehibe ao amin'ny Oniversiten'i Illinois.
Amin'ny raharahan'i CAST, dia natolotra tamin'ny alàlan'ny loka avy amin'ny National Institute of Justice sy ny Office of Justice Programs ao amin'ny Departemantan'ny Fitsarana Etazonia. Ny fomba fiasa amin'ny fampivoarana ny algorithma dia niara-niasa tamin'ny Arizona State University.
Ny fampiharana dia manohana ny tahiry SHP, ny fisehoan-javatra matetika eo amin'ny sehatra, ary amin'ny alalàn'ny fanadihadiana ara-tsosialy dia mamoaka ny fironana amin'ny daty, izay karazana sarintany maro no ilaina, toy ny vondrom-piarahamonina, trano fisakafoanana na vondrom-piarahamonina.
Satria ny valiny dia mety tsy ho an'ireo grafika, sarintany an-tsisim-pejy avy amin'ny fivilian-tsoratra statistika, sarintany hafana sy sarintanin'ny kalandrie ihany koa.
Angamba ny zavatra manintona indrindra amin'ny rindranasa dia ny miaraka amina asa manokana efa voafaritra ho an'ny famakafakana fironana sy ny tanjona fanaovana tatitra mifototra amin'ny raharaha. Ohatra, ny fironana iray dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fiampitana ireo antontan'isa momba ny isan'ny mponina hanehoana ny isan'ny tranga mahery setra ao amin'ny sehatra, ohatra, ny tranga isan'ny maty isaky ny mponina zato. Avy eo dia mamela hanao fanadihadiana ara-potoana izy io, hamaritana amin'ny alàlan'ny sary ny fitomboana, ny fihenam-bidy ary ny tranga manokana amin'ny fandalinana na amin'ny ambaratonga tabular na spatial. Toy izany koa, ny fampifanarahana ny kalandrie dia afaka manao fanadihadiana eo anelanelan'ny andro voafaritra manokana, toy ny zava-nitranga tamin'ny fety na ny faran'ny herinandro.
Tsy maintsy milalao ilay fitaovana ianao, satria afaka mamorona sarintan-tsary mihetsika amin'ny ambaratonga hafa aza, ahafahana mamaritra ny toerana hiparitahan'ny heloka bevava raha mitohy ny fironana. Mazava ho azy, tsy maintsy mahaliana ny mampihatra angona vaovao avy amin'ny fepetra fiarovana noraisina, hahitana ny fiatraikany. Zavatra tena ilaina any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny tontolon'ny ankehitriny ny fitaoman'ireo heloka bevava voarindra sy ireo andian-jiolahy izay azo antoka fa ho tsikaritra ho toy ny jirofo mifandraika. Ary satria natao ho an'io tanjona io ny rafitra, dia mifanaraka amin'ny maodelin'ny fitantanana fiarovana sy ny fisorohana ny herisetra, toy ny fitantanana quadrants, sehatra na distrika.
Ho famaranana, fampiharana sarobidy. Iray indray eo ambanin'ny maodely loharano misokatra, izay angatahanay mpanohana fanaparitahana, tsy mila jerena izay vola ampiasain'ny governemanta amin'ny fiarovana fa tsy dia misy fampiasa manokana.
Azo alaina avy amin'ny CAST ny CAST Ity rohy ity. Izy koa mpampiasa mpampiasa.
Previous Post«Previous Injeniera momba ny teknolojia an-dàlambe any Espana ary injeniera sivily any Sina ao anatin'ny 4 taona monja
Next Post Topografia nentim-paharazana vrs. LiDAR. Fahamarinana, fotoana ary vidiny.manaraka »
3 valiny "CAST - rindrambaiko maimaimpoana handinihana heloka bevava"
Luis Diaz hoy izy:
Tsara ampiharina hetsika ireo tarehimarika ho an'ny heloka bevava tranga, GVSIG nanolotra vahaolana ihany koa amin'izao fotoana izao izay ampiharina eo amin'ny Castellón Espaina atao hoe GVSIG Crime, na iza na iza mamaky ity lahatsoratra ity ianao mahatsapa hafa lehibe io dingana voalohany be sehatry ny fampiasana ny izay fanadihadiana ao amin'io faritra io. Mba hiatrehana Background ity karazana fikarohana.
Andramo ity rohy ity
Toa midina ny rindran-tserasera, tsy mbola misy ny public?